Tag: Muungaab | Sagal Radio Services
Muungaab “Aniga iyo kuxigeenadeeda wax khilaaf ah oo inoo dhaxeeyo ma jirto”
Guddoomiyaha Gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Xasan Maxamed Xuseen (Muungaab) ayaa beeniyay in kuxigeenadiisa uu khilaaf kala dhaxeeyo, kadib markii uu soo baxay warar sheegaya in Kuxigeenadiisa ay dacwad isaga ka gudbiyeen oo ku aadan wada shaqeyn la’aan iyo in howsha Gobolka uu xafiiskiisa ku soo koobay.
Muungaab “Ma aqbaleyno inay Shiico timaado, waa u digeynaa NGO-yada fikirka shiicada faafinaya”
Sagal Radio Services • News Report • May 8, 2015
Guddoomiyaha Gobolka Banaadir ahna Duqa magaalada Muqdisho Xasan Maxamed Xuseen (Muungaab) ayaa sheegay in aysan aqbali doonin in magaalada Muqdisho lagu beero fikir Shiico ah.
Muungaab “Dadka qurbaha ku maqan ee aan wali soo laaban ee guryahooda bur bursan ha dayactirteen, hadii kale…”
Gudoomiyaha Gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Xasan Maxamed Xuseen (Muungaab) ayaa ugu baaqay dadka qurbaha ku maqan ee aan wali ku soo laaban dalka inay si deg deg ah guryahooda u dhistaan ama dayactirtaan.
Muungaab “Wasiirada la soo magacaabayo, yeysan Madaxweynaha ku ciriirin Madaxtooyada, xaafadaha ha soo degaan”
Gudoomiyaha Gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Xasan Maxamed Xuseen (Muungaab) oo xalay Maamulkiisa soo qaban qaabiyay xaflad lagu taagerayay Ra’iisul Wasaaraha cusub oo ay ka qeyb galeen Madaxweynaha, Ra’iisul Wasaaraha iyo Mas’uuliyiin ayaa ugu baaqay Ra’iisul Wasaaraha inuu soo dhiso Xukuumad tayo leh.
Guddoomiyaha Gobolka Banaadir oo si weyn loogu soo dhaweeyay Sweden (SAWIRRO)
Guddoomiyaha Gobolka Banaadir, ahna duqa Magaalada Muqdisho Xasan Maxamed Xuseen (Muungaab) iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa maanta si weyn loogu soo dhaweeyay Magaalada Stockholm ee caasimadda Dalka Sweden.
Muungaab “Si Toos ah ha naloo hoos keeno Nabad Sugidda iyo Booliska G/banaadir”
Guddoomiyaha Gobolka Banaadir ahna duqa Magaalada Muqdisho Xasan Max’ed Xuseen Muungaab oo ka qeyb galay aaska Marxuumad Saado Cali Warsame ayaa ugu horreyn ka tacsiyeeyay geerida Xildhibaanadda kadibna faah faahin wdheeri ah ka bixiyey aragtida Maamulkiisa ee ku aadan dhibaatooyinka amni darri ee soo noq noqday ee iyagu had iyo goor ka dhaca Magaalada Muqdisho.